7 Iindawo zokuthanda kwihlabathi liphela | Gcina A Isitimela
ekhaya > Uloliwe kuhambo Italy > 7 Iindawo zokuthanda kwihlabathi liphela
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 07/06/2021)
Ukusuka kwiinqaba zaseYurophu nakwiidolophu zakudala ukuya eHong Kong enomdla, la 7 Iindawo zokuthanda umhlaba wonke ziya kwenza uthando lwakho lunyuke. le 7 Iindawo zokuthanda yindawo efanelekileyo yokubeka isahluko esihle kwibali lakho lothando, kunye nokuvuselela umlingo.
1. Eyona ndawo kuthandwa kuyo kukuthandana kwilizwe liphela: Paris
Ukuba ujonga izithetha-ntonye kwisichazi-magama "uthando", uyakufumana iParis ibhalwe ngoonobumba abakhulu. Umtsalane wayo ongachazekiyo, ubuhle ebusuku, patisserie, kunye neendawo ezininzi zemifanekiso yothando, yenza iParis enye ye 7 Iindawo zokuthanda umhlaba wonke.
Ukuhambahamba kwindawo entle yaseLa Marais, ukumamela umculo wasesitalatweni, okanye ukuba nepiknikhi kwezona ndawo zintle, IParis yimbonakalo yothando. Ewe, Isenokungothusi into yokuba iParis iphezulu Ikhefu lomtshato eYurophu, kwaye unokucinga ukuba onke amabala ayo othando aya kubhukishwa ngokupheleleyo. kunjalo, esi sixeko sithandekayo sigcwele amabala, apho ungakhwaza khona uthando lwakho, okanye ube ne-snap-free snap. IParis ngokungathandabuzekiyo sesona sixeko sothando, yazo zonke izibini, kuyo yonke imibala yomnyama.
Ezona zinto zithandwayo zothando eParis
Bhadula ujikeleze iMusee Carnavalet, ukwanga eCanal Saint-Martin, kwaye uyonwabele ipikniki yothando kwindawo ebonakalayo yeChamps de Mars.
2. Indawo egqibeleleyo yokuthanda e-Itali: Venice
Ngelixa iVenice sesinye sezixeko zokhenketho eYurophu, uya kufumana iindawo ezininzi ezifihliweyo, Ungabelana phi ngejelato okanye ipitsa. Iibhulorho zedolophu ziya kukuthatha kunye nesithandwa sakho siye kwiikona zendlela ezingaphandle, iindlela, kunye neeresityu zalapha, apho unokutya khona kwase Italian, kunye ne-toast ukuthanda iwayini yase-Italiya okanye iAperol.
Usuku olufanelekileyo lokuthandana eVenice luya kuqala ngokuhlola iibhlorho ezininzi. ke, ungatya ipitsa ye 2 kunye nejelato. Kuyacetyiswa ukuba ushiye utyelelo 2 iziqithi ezinomtsalane iBurano neMurano, kwisiqingatha sesibini sosuku, emva kokuhamba kwezihlwele zabakhenkethi. Le ndlela, Uya kuba neziqithi zonke, Imifanekiso yothando.
Izinto zaseRoma ezithandwa kakhulu eVenice
Bazula ujikeleze iDorsoduro, ubumelwane bendawo, okanye utye eCantina Do Spade, apho uCasanova wayeqhele ukuthatha isidlo sangokuhlwa. ke, Unokuba nesidlo sasemini sothando kwisiqithi saseBurano, kwaye uyonwabele ukukhwela i-gondola xa litshona ilanga. Ungaqala iholide yakho yothando nge uhambo ngololiwe lothando ukusuka eLondon okanye eSwitzerland ukuya eVenice.
3. Iindawo zokuthanda eYurophu: Lake Como
Ilanga liya kutshona kwiialps, kubonakalisa echibini, kwaye uhambahamba kunye nentanda yakho kunye Ukuhamba kwabathandi, umkhondo wabathandi eVarenna. Ngokuqinisekileyo uya kuvuma ukuba oku kuyenza IChibi Como yindawo yokuthandana engalibalekiyo yokubaleka kwezothando 2.
Ukongeza kwidolophu enomtsalane yaseVarenna, Bellagio, kunye neVezio zibonelela ngombono omangalisayo weLake Como kunye neendawo ezininzi zothando.
Uninzi lwezinto zothando zokwenza eLake Como
Yonwabela ukuhamba ngothando olukhulu kwiintaba zeLari kuyo yonke indlela yepikniki yomlingo eMonte Crocione. Ukuba uthandana ne-adrenaline, emva koko uhambo ngenqwelomoya elwandle ngaphezulu kwechibi luya kuvusa loo mabhabhathane!
4. Iindawo zokuthanda eTshayina: ehong Kong
Modern, imincili, nezinomtsalane, IHong Kong sesinye sezona zixeko zithandwayo emhlabeni. Izakhiwo ezinde zesixeko, kunye neziqithi, unikeze imibono emangalisayo kwimifanekiso eya kubamba uthando lwakho. IHong Kong intle emini kunye nezibane zasebusuku, ukutshona kwelanga nokuphuma kwelanga, unikezela ngemisebenzi emininzi yothando, ye iholide yokuphumla ezimbini, okanye i-epic adventure, ukuyibeka phezulu 7 Iindawo zokuthanda umhlaba wonke.
Uninzi lwezinto zothando ezenziwa eHong Kong
Usuku olufanelekileyo lokuthandana luza kuqala ngolwandle olujikeleze iVictoria Harbour, okanye ipikniki elunxwemeni lweRepulse Bay. Ngenjika Langa, ungathatha iklasi yokupheka yabucala, kwaye ugqibe ngokukhulisa iiglasi zakho ukuba uzithande ukutshona kwelanga.
5. Ukuthanda indawo yokufikela kwihlabathi liphela: Ostriya
Ostriya , ilizwe leenqaba, igadi ezimangalisayo, kunye needolophu ezithandekayo, yindawo ethandwayo yothando eYurophu. Ukuba ufuna ukubaleka izihlwele, emva koko iHalstatt yeyona ndawo ifanelekileyo, ukongeza kwenye uhambo oluhle losuku oluvela eVienna.
Ugcino lwendalo olumangalisayo njenge-Innsbrucker inika ezona ndawo zintle zeentaba zase-Austrian kunye nentlambo, ukunyuka kothando. Ukwengeza, iidolophu zamandulo ezinomtsalane eziyindawo efanelekileyo yokonwaba-emva kwamabali othando ayimbali. kunjalo, ukuba ukhetha ukubaleka edolophini ngakumbi, emva koko iVienna igqibelele impelaveki yothando. Ngaphezu, IVienna yenye ezona ndawo zifanelekileyo ze-LGBT kwihlabathi liphela, ke iyazamkela zonke izibini, nakweyiphi na imeko yobudlelwane, kwaye ndilinde wena kunye nezinye ezibalulekileyo.
Ezona zinto zithandwayo ngabantu baseRoma
Usuku lokuthandana e-Austria luya kuqala nge-Austud strudel kwisidlo sakusasa kwi cafe yendawo. ke, phuma uye ngaphandle kwegadi yaseOstriya okanye inqaba. Ukwengeza, ukuba niyimidlalo emibini emva koko niyokunyuka intaba kwiiAlps zaseAustria, izakulunga.
6. Iindawo zokuthanda kwihlabathi liphela: Prague
Isilwanyana kunye nomtsalane, I-Prague iyathandana kwaye ibambe indawo kwindawo yethu 7 Iindawo zokuthanda ezilungileyo kwihlabathi. Ewe, kuyaphithizela ngabakhenkethi, kodwa zininzi iindawo zokujonga kunye neepaki eziluhlaza, ukunqanda izihlwele zabahambi, kwaye wonwabele Eyona nto intle ngePrague yakudala.
Imivalo emincinci emincinci, iibhulorho ezintle, Kunye Mala Strana ebumelwaneni zezona zilungele ukuthandana. Ngelixa iPrague yenye yezona ndawo zidumileyo eYurophu, zininzi kakhulu iindawo ezifihliweyo; Indawo ebukekayo yaseMala Strana, kunye nepaki eneembono zedolophu, IPalacky Bridge, kuphela ezimbalwa zothando ezifihliweyo.
Ezona zinto zithandwayo zothando ePrague
Ukuhambahamba eMala Strana, ibhiya ngasemlanjeni iVltava, isidlo sangokuhlwa esineembono zedolophu, kunye necocktails kwindawo yeHemingway.
7. Iindawo zokuthanda kwihlabathi liphela: Isithili seLake eNgilani
Xa indawo yaphefumlela imibongo yothando kaWilliam Woodsworth, ke yindawo ephezulu yothando. Kanjalo, Uya kubona ukuba umhlaba weLake eNtshona England uthandana kakhulu. Enkosi ku 6 Oovimba bendalo bendawo yasemaphandleni nabamaNgesi, yaye 16 amachibi abukekayo.
Ifumaneka kwingingqi yeCumbria, Umhlaba wamachibi yenye yezona ndawo zintle eNgilane. ngoko ke, ukunyuka intaba, kumachibi nakwiitarn, yenye yezona zinto zothando zokwenza emhlabeni. Uya kuziva ngathi unyathela inoveli yomlingo kaJane Austen, Apho uthando luthintela yonke imiqobo.
Ezona ndawo zithandwayo eCumbria
Ichibi laseKeswick, ukunyuka okumangalisayo ukuya epikinikini ngaselwandle. Ukwengeza, Incopho kaHelvellyn, Ingxangxasi yindawo enamaphupha ngokupheleleyo.
le 7 Iindawo zokuthanda ziindawo ezoyikekayo zokunonga ulwalamano lwakho. Apha Gcina A Isitimela, Siya konwaba ukukunceda ucwangcise uhambo lwakho lothando kwezi ndawo zinothando neziphuphayo.
Ngaba ufuna ukufaka i-post yethu yeblogi "Iindawo ezi-7 zothando kwihlabathi liphela" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fxh%2Flove-destinations-worldwide%2F- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
oya kuyo uthando LoveDestinations romanticdestinations RomanticvacationEurope weddinginEurope